Esi melite Nwanna laser na-ebi akwụkwọ na Linux | Site na Linux
Imirikiti nkesa GNU / Linux ugbu a nwere nkwado dị ukwuu maka ngwaike nke oge a, agbanyeghị, a ka nwere ụfọdụ ndị nrụpụta ngwaike na-egbochi n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na sistemụ arụmọrụ anyị hụrụ n'anya nwere ike dakọtara na ngwọta ha. Ọ dabara nke ọma na ọtụtụ, nke a abụghị maka ndị anyị na-eji Nwanna ika na-ebi akwụkwọ ebe ha nwere nwa afọ ọkwọ ụgbọala maka Linux.
Enwere m ugbu a Nwanna DCP-L2550DN laser printerỌ bụghị na ọ bụ ezigbo akwụkwọ nbipute mana ọ bụrụ na ọ na-enye m ohere ibipụta ọsọ ọsọ, jiri ezigbo mma wee zute atụmanya ọnụahịa, ọ dịkwa mfe ịnweta cartridges Nwanna TN2410 na TN2420 dị ọnụ ala, nke bụ nke akụrụngwa a na-eji. Na Linux Mint ọ na-arụ ọrụ mara mma nke ukwuu maka m, ọ bụ ezie na mgbe m nwere ezé dị ụtọ m tara ahụhụ ntakịrị karịa nkịtị ka m nwee ike ime ka ọ rụọ ọrụ, yabụ ọ dị mma ịkọwa usoro ndị ọrụ nwere ngwa ndị yiri ya kwesịrị ime.
Ihe mbụ ndị ọrụ nwere ndị na-ebi akwụkwọ nke ika a ga-eme bụ ịga na nwanne Linux Linux drivers ma budata ndị ọkwọ ụgbọ ala maka ụdị ngwa nbipute a kapịrị ọnụ, a na-ekesa ha site na ngwaike dị iche iche nke ụlọ ọrụ na-ekesa (CUPS, LPR, Scanner, ADS, laser printers, among others). Categorydị ọ bụla nke ndị ọkwọ ụgbọala na-enye anyị ihe ngwọta maka ngwaahịa ndị metụtara ya, nke kpatara ya, dịka ọmụmaatụ, otu onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ịrụ ọrụ maka Nwanna DCP-L2510D, Nwanna HL-L2310D na Nwanna MFC-L2710DN ndị na-ebi akwụkwọ.
Nwanna na-enye anyị na peeji nke ọkwọ ụgbọala ya otu akwụkwọ ntuziaka maka iji dị ka nkesa anyị nwere, ihe ngwaike ngwaike na ụlọ ya, n'otu ụzọ ahụ, ọ na-enye anyị ohere nke ịlele ọrụ ziri ezi nke onye nbipute, nhazi ụdị mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ọbụna ọnọdụ nke cartridges gị.
Usoro a dị mfe, anyị na-aga peeji nke ọkwọ ụgbọala Nwanna, budata onye ọkwọ ụgbọ ala kwekọrọ na ngwaike anyị na distro anyị, ma wụnye ngwugwu ntọala na iwu na-esonụ:
Mgbe ahụ, anyị malitegharia pc anyị, ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala n'ihi na egosighi ha na ibe nkwado Nwanna, n'ọnọdụ ụfọdụ, anyị ga-aga ngalaba sistemụ / nchịkwa / ndị na-ebi akwụkwọ (dị ka o kwesịrị ekwesị na distro gị) wee họrọ onye nbipute ị ka wụnye, n'ụzọ dị otú a anyị ga-enwe ike iji onye nbipute anyị ala nna anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Esi melite Nwanna laser na-ebi akwụkwọ na Linux
Ana m eji nwanne dcp 7065dn na manjaro gnome na ndị ọkwọ ụgbọala nọ na AUR.
Ndị na-ebi akwụkwọ a na-enwekarị ndị ọkwọ ụgbọala na rpm na deb maka archlinux na nkwekọrịta na-adịkarị na AUR na maka gentoo enwere nwanne nwoke.
n'ụzọ dị irè
Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ bụ sọftụwia n'efu - oghere mepere emepe?
Na nke a, ha bụ ndị ọkwọ ụgbọala maka Linux, mana isi mmalite adịghị (ha anaghị emeghe isi), ọ dị nwute
Site na ihe ha na-agwa, ma ọ dịkarịa ala Nwanna nwere nkwado karịa Ricoh. Enwere m Ricoh multifunction SP310spnw nke magburu onwe ya, mana mgbe ọ bịara iji ya na Linux ọ na-enye ọtụtụ isi ọwụwa, yana naanị akụkụ mbipụta nwere ike iji. Nkwado Ricoh bụ ihe na-adịghị adị, na agbanyeghị na o chere na ọ nwere ndị ọkwọ ụgbọala maka Linux, mgbe ị na-achọ ịwụnye ha ọ na-enye njehie, n'ihi na ... CUPS na-agba ọsọ !!! Enwere m ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ na agbanyeghị na ezigara m Ricoh email ozugbo na-arịọ ha ka ha chọta ụzọ m ga-esi mepụta ndị ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị ekwesị, ruo ugbu a ha anatabeghị nnata nke email ahụ. Ekwesịrị m iji OS ọzọ nwee ike i toomi.
M na-eji wifi Nwanna laser HL-2135W wifi dị oke ọnụ ma ọ dị mma na Linux ruo ọtụtụ afọ. Nnọọ obi ụtọ.
A na-etinye 1210w site na iji pkgbuild nke ochie ma na-agbanwe ya, ọ na-efu efu ole na ole, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Zaghachi Puigdemont 64bits
Azụla Nwanna, zụta HP, aga m akọwa ihe kpatara ya: Ee, ha nwere ndị ọkwọ ụgbọala maka GNU / Linux, mana ha bụ ndị nwe. Ọ bụrụ na mgbe afọ X gasịrị, ha kwụsịrị imelite ndị ọkwọ ụgbọala ha maka kernel ọhụrụ ahụ ma ha kwụsị ịrụ ọrụ, ha ga-ahapụ gị ka ị dina ala ma ọ nweghị onye ga-enwe ike gbanwee koodu ahụ n'ihi na anyị enweghị ya. Na-arụ ọrụ anyị na-eji Nwanna DCP7065dn.
Kpachara anya na HP n'ihi na o nwekwara ndị nbipute na-enweghị ndị ọkwọ ụgbọala anaghị akwụ ụgwọ, dịka HP LaserJet Pro CP1025nw. Zụrụ naanị ndị nwere ndị ọkwọ ụgbọala n'efu iji zere ịpụnara ha ihe n'ọdịnihu iji zụta igwe obibi akwụkwọ ọhụụ ma ọ bụ ikike Windows ma ọ bụ Mac OS ọhụrụ (nke ha nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala mgbe niile).
Azụla n'ọnọdụ ọ bụla onye nbipute SHARP, anyị nwere MX 2310U copier / printer: nke mbụ ya onye nhazi ọkwọ ụgbọ ala maka Linux (nke mbụ)http://www.sharp.es/cps/rde/xchg/es/hs.xsl/-/html/centro-de-descargas.htm?p=&q=MX-2310U&lang=ES&cat=0&type=1214&type=1215&os=&emu=) nwere ọtụtụ njehie na-edegharị aha ndị na-eme ka anyị metụ edemede ahụ aka ka ọ rụọ ọrụ nke ọma, nke abụọ anyị nwere ya na netwọkụ ahazirila koodu onye ọrụ maka ndị ọrụ ọ bụla wee tụgharịa na onye ọkwọ ụgbọala Linux enweghị ebe ọ bụla itinye koodu ahụ na Windows ee na Ọrụ Job - Nyocha Onye Ọrụ - Usernye). Yabụ enweghị m ike iji ya site na GNU / Linux, agbalịrị m aghụghọ dịka ịgbanwe faịlụ PPD (https://linuxsagas.digitaleagle.net/2014/12/05/setting-up-a-sharp-mx-2600n-printer-on-ubuntu/) ma gbalịa onye ọkwọ ụgbọala nke na-eji injinia ntụgharị maka izo ya ezo (https://github.com/benzea/cups-sharp).
Usoro ihe mmasị: HP nwere ọkwọ ụgbọala n'efu, HP nwere ọkwọ ụgbọ ala, Nwanna nwere ọkwọ ụgbọ ala, ọ bụghị sharp.
Ha chọrọ ọnụọgụ abụọ ka ha rụọ ọrụ, dịka ọmụmaatụ n'okwu nwanne dcp 7065dn na m na-eji akụkụ nke ọkwọ ụgbọala ma ọ bụrụ na ọ bụ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ mana ọ chọrọ ọnụọgụ abụọ nke na-enweghị n'efu.
Zere ịzụrụ ndị na-ebi akwụkwọ na-enweghị ndị ọkwọ ụgbọala n'efu, ma ọ bụ na ha ga-anọ n'aka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ma ọ bụrụ na ọ meliteghị onye ọkwọ ụgbọ ya n'otu oge na sistemụ arụmọrụ ị na-eji, ọ ga-amanye gị ịzụta usoro ọzọ ma ọ bụ onye nbipute ọzọ.
Otu HP nwere ndị ọkwọ ụgbọala anaghị akwụ ụgwọ ka mma, kpachara anya na e nwere HP nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala dịka HP LaserJet CP 1025nw, na Nwanna ha niile nwere ọkwọ ụgbọ ala ma ọ dịkarịa ala ha dị. Nke ka njọ bụ ndị na-ebi akwụkwọ SHARP ndị na-ebi akwụkwọ nke onye ọkwọ ụgbọala maka GNU / Linux enweghị nhọrọ dịka itinye koodu enyere gị ka ibipụta na netwọkụ ahụ, nke na-egbochi iji ya rụọ ọrụ na Linux ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ijikwa mbipụta nke nke ọ bụla mere dịka ọmụmaatụ Sharp MX 2310U nke m nwedịrị ike ịme ka ngwa nbipute rụọ ọrụ site na imezi PPD ya (https://linuxsagas.digitaleagle.net/2014/12/05/setting-up-a-sharp-mx-2600n-printer-on-ubuntu/) ma ọ bụ ya na engineered engineered agbara (https://github.com/benzea/cups-sharp).
Ehihie ọma. (Daybọchị, abalị, wdg) Onye enwere ike iduzi m na ntinye na nhazi nke nyocha maka ndị na-ebi akwụkwọ ntanetị a? ma ọ bụ ịgwa m ebe m pụrụ ịchọta tupu gbarie ozi. Ebe m na-arụ ọrụ, a na-eji ọtụtụ ụdị Nwanna multifunction arụ ọrụ na nhazi nke onye nbipute ozugbo awụnyere ndị ọkwọ ụgbọala ahụ dị mfe, mana oge ụfọdụ sistemụ (n'ozuzu zorin os 9 lite) na-achọpụta na-akpaghị aka ụfọdụ nyocha na netwọkụ. Ọ ga-amasị m ka mmadụ gwa m otu m ga - esi tinye aka nyocha ahụ (etu esi nye ya iwu ka m mata igwe nyocha ihe ọfụma nwere ụfọdụ IP). Achọgharịala m na ihe kachasị rụpụtara bụ na aha nyocha na ip na-egosi na ndepụta nyocha dị mfe mana ọnweghị ihe nyocha. Otu ihe a na - eme m na ọtụtụ ọrụ Samsung, mana ndị a na - apụta na ndepụta simplescan karịa ụmụnne. Ọ na-eme m na PC na-achọpụta ihe nyocha na nke na-esote ya anaghị eme; na ha nọ na otu netwọk.
Otu ajụjụ, ọ bụ nzuzu n'ihi na achọtala m mana nke ọma, m ga-ajụ ya, ị maara ma ndị na-ebi akwụkwọ Lexmark (Z11 LPT na X75 niile na-arụ ọrụ) na-arụ ọrụ nke ọma na Linux? site na ihe m lere anya, ọ dịghị ihe ọ bụla ma ọlị, na Ubuntu 9.10 nke Z11 rụrụ ọrụ, na-etinye kernel ochie ọ ga-arụ ọrụ?
PS: ha nwere ike ịkparị, m kwesiri ya 😉
Gbalịa nke a: wụnye Ubuntu 9.10 na virtualbox ma gbalịa ibipụta ebe ahụ gaa na ngwa nbipute gị. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, ịnwere ike ịnwa ịkekọrịta na netwọkụ ahụ site na Linux gaa na Linux iji bipụta site na nke gị ma ọ bụ bipụta ya na nke gị na pdf ma tinye pdfs ka ibipụta na folda nchekwa n'etiti usoro abụọ ahụ iji nwee ike ịnara ya na Ubuntu 9.10.
Nke ahụ bụ nsogbu nke ndị ọkwọ ụgbọala nwere ikike, ọ na-eme otu ihe ahụ na Windows, ị zụrụ ihe 15 afọ gara aga na Windows XP na enweghị onye ọkwọ ụgbọala maka win7 ma ọ bụ 10.
Ejila ihe ọ bụla jiri ndị ọkwọ ụgbọala nwere ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na enwere ihe na asọmpi ahụ na ndị ọkwọ ụgbọala n'efu, họrọ nke ọma.
Daalụ maka ozi ahụ, ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na emesịa ị nwere ike ịme nkuzi na otu esi ejikọ ngwa ngwa ngwa nwanne site na wifi ... na nke m ọ bụ MFC9330CDW. Daalụ n'ọdịnihu
Enwerem Nwanne HL-L2340DW ma ejikọrọ m ya na Wifi. Iji jikọọ ngwa nbipute site na USB enweghị nsogbu, mana ọ nweghị ike iji WiFi rụọ ọrụ.
Nwanna na-enye gị, ma ọ dịkarịa ala maka Ubuntu, ihe akpọrọ Driver Install Tool, nke kwesiri ịbụ onye ọrụ naanị ya (ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ga - eme) ndị ọkwọ ụgbọ ahụ dị mkpa. Nsogbu bụ na ị ga-ama ka esi eme ya. N'ihe m, mgbe m gagharịrị Google ntakịrị, ahụrụ m na Nwanna na-akọwara gị ya ebe a:
Nsogbu a bu imata ihe oku ala mmụọ itinye na URI ... Ya mere, na-aga n'ihu na nchọta ahụ, achọtara m azịza ya na nkọwa si na otu jose1080i n'isiokwu a:
Enweghị ike ịkọwa ya nke ọma.
Ọ naghị arụ ọrụ na ụdị Nwanna niile, nri? Enwere m oji na ọcha na laser ma ọ nweghị ụzọ
M na-eji Linux Mint 19 Cinnamon 64-bit, azụrụ m Nwanna HL-1110 kọmpat monochrome laser na ngwa nbipute na mgbe kpoo obi m (ọ na-aga site na USB) kama Wifi, ọ na-apụta na nchịkwa na ọbụla na-akpali akwụkwọ mana ha na-apụta oghere, maka ihe m nwere «windols» mee Mbipụta, ebe ọ na-aga nke ọma.
Zaghachi Enrique Gallegos